Romantic Off-grid retreat e North Pennines AONB
Ifama sinombuki zindwendwe onguLowmosscottage
I-Cottage ye-Moss ephantsi.
Indlu entle nepholileyo, esandula ukulungiswa, ngaphandle kwegridi ngokupheleleyo yeholide enemibono emangalisayo kunye neyothusayo ye-Weardale. Kwinduli ekude kwezinye izindlu kunye neziphazamiso, le ndlu yenkulungwane ye-18 yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga esibhakabhakeni esimnyama ngelixa ugqunywe ngumlilo, okanye ungene kwindawo yokuhlambela yefestile. Ifanelekile kubahambi, amagcisa, abafoti, ababhali, ii-detoxers zedijithali, abahambi beholide kunye nabani na ofuna ukubaleka kuyo yonke into.
Hlala kwindawo engasese, kwindlwana yeeholide zothando ebekwe kwindawo entle evulekileyo yase-Weardale.
Ungaphumla kumlilo welog, wonwabele iimbono ze-moorland ukusuka kwindawo yokuhlambela kwigumbi lokulala, okanye uphume kwaye ujonge amaphandle anqabileyo.
Sikwindawo yesibhakabhaka esimnyama-ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukucima izibane kwaye uvumele amehlo akho aqhelane nobumnyama. Yonwabela umboniso omangalisayo ukusuka kwintuthuzelo ye-cottage epholileyo.
Hayi kwabatyhafileyo! Le cottage ilungele uhlobo lwangaphandle olunandipha ukunqunyulwa kwihlabathi lanamhlanje. Abantu abathanda ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukufunda, ikhadi okanye imidlalo yebhodi, ukubhala, ubugcisa...
Amanzi anikezelwa kumthombo wabucala kwaye aphathwa kwi-cottage kwaye avavanywa rhoqo yi-Durham County Council ukuqinisekisa ukuba kukhuselekile ukusela,
impompo eyongezelelweyo ifakelwe ekhitshini eqhutywa ukusuka kwisixokelelwano se-osmosis esingasemva ebonelela ngamanzi acocekileyo nacwenge ngakumbi kunamanzi asebhotileni.
Amanzi aphambili endlu asempilweni ngokugqibeleleyo, nangona qaphela ukuba kunokubakho umbala omncinci omdaka emanzini ngexesha lemvula ...
Amandla abonelelwa yibhanki enkulu yebhetri kunye neepaneli zelanga kukho amandla amaninzi okusetyenziswa okuqhelekileyo kodwa nceda uqaphele ukungabikho kwelanga okanye ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kuya kubangela ukuba ijenereyitha iqalise ngokuzenzekelayo, oku kuhlala kuthatha iiyure ezi-3 kodwa ayinakuviwa ngaphakathi. impahla.
I-cottage ikude-ihlala kwimihlaba yeehektare ezi-6 owamkelekileyo ukuba uhlolisise, kwaye ifikeleleke ngomzila wangasese. Lo mzila ufikeleleka ngokugqibeleleyo kwimozulu entle ukuba uqinisekisa ukuba uhlala kwi-1st gear! Kukho iigeyithi ezimbalwa ekufuneka zivulwe, ke ukuba woyika ingqele, umanzi nodaka le ndawo mhlawumbi ayisiyiyo eyeyakho!
Xa imozulu ibanda, kukho umngcipheko wokuba umzila unokuba ngumkhenkce kwaye usenokungakwazi ukuphinda unyuke induli - siyakucela ukuba ujonge uqikelelo lwemozulu, kwaye ukuba kukho umngcipheko wekhephu okanye iqabaka, nceda upake imoto yakho encotsheni yenduli kwindlela enkulu kwaye uhambe uye kwi-cottage. Ukuhamba malunga ne-10-15 min.
Umbuki zindwendwe ngu- Lowmosscottage
Ukuzihlola ngokwakho kunikezelwa ngesefu engundoqo kwipropathi kodwa nayiphi na imiba okanye iingxaki ezinokuvela siyavuya kakhulu ukuqhagamshelwa kwaye iinkcukacha zoqhagamshelwano ziya kuthunyelwa ngaphambi kokungena.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cowshill